महिला र पुरुषहरूको लागि सगाई घण्टी।
संलग्नता के छल्ले
सगाई के छल्लेका लागि ग्राहकहरू समय, स्थान र संस्कृति अनुसार भिन्न हुन्छन्। एक सगाईको अंग ऐतिहासिक रूपमा असामान्य भएको छ, र जब यस्तो उपहार दिइएको थियो, त्यो विवाहको रिंगबाट अलग थियो।
महिलाहरु को लागि सगाई को छल्ले
देवताहरू, सुन्नुहोस्। तपाईं आफ्नो विशेष दिनको बारेमा सपना देख्नुभयो किनभने तपाई धेरै जवान हुनुहुन्थ्यो। तपाईंले आफ्नो कपडा, समारोह, पहिलो नृत्य कल्पना गर्नुभएको छ; हरेक विवरण। तर, के तपाईं कहिल्यै त्यहाँ महिलाहरु को लागि सगाई को कितना विभिन्न प्रकार को सगाई को बारे मा सोचना बंद गर्दै छन्?
तपाईंको उत्तम दिन, निस्सन्देही, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। तथापि, रिंग तपाईंको चीजको बाहिरी दिन हरेक दिन लुगा लगाउँदछ र यो पनि पूर्ण हुने योग्य छ।
पुरुषहरूको लागि सगाई बजाउने
यदि महिलाहरूले आफ्नो स्थिति घोषणा गर्न सगाई के छल्ले लगाउन सक्छन्, पुरुषहरू किन सक्न सक्दैनन्? खैर, त्यहाँ साँच्चै कुनै कारण छैन। किनकि अधिक जोडे मान्छे पुरुष को आफ्नो स्थिति को सबूत पहनने को रुचि गर्छन र समाज को रूप मा अधिक पढाने को रूप मा गैर - पारंपरिक सम्बन्ध स्वीकार गर्दछ।
गुलाब सुन, सेतो सुन, पीला सुन, प्लैटिनम या पालीडियम?
आजका गहनेहरू विभिन्न रंगहरूमा अचम्मका विभिन्न प्रकारका धातुहरू छन्। जबकि प्लैटिनम र प्यालेडियम जस्तै विकल्पहरु अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्, सुन हमेशा एक राम्रो विकल्प हो। पहेंलो सुन बनाइयो। पहेलो सुन बनाइएको गुलाब सुनको बीचमा सेतो सुनको रङहरू तपाईंको विकल्पलाई कम गर्न एक राम्रो तरिका हो जब निर्णय गर्दा कुन धातुले गहना छनौट गर्छ जुन अन्ततः तपाईंको जीवनको प्रेमलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
सस्ती सगाई के छल्ले
लागतबाट दावी नगर्नुहोस्। सस्ती सगाई के छल्ले को लागि धेरै विकल्प उपलब्ध छन्। निस्सन्देह, "किफायती" को अर्थ अत्यधिक विषयक हो। तर जब बजेट फरक हुन सक्छ, सबैसँग छ।
गोल्ड त्यागी, ओवल, पन्ना, नाशपाती वा राजकुमारी कट हीरे, शैलीको संयोजन, आकार र लगत्तै साँच्चै असीमित छ।
प्रत्येक चार सी (क्यारेट वजन, कट, रंग, स्पष्टता) मा प्रत्येक को साथ हीरा चार्ट ग्रेड बीचको भिन्नता चित्रण संग छ। अधिक सिकिसके पछि, यदि तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा हीरा हेर्न आवश्यक छ भने, तपाईंको स्थानीय गहना स्टोरमा जानुहोस्। तपाईं व्यक्तिगत रूपमा हीरामा कुन कुराको मूल्यवान् हुनुहुन्छ भन्ने बारे अझ राम्रो समझ प्राप्त गर्नुहोस्।
रत्न सगाई को छल्ले कि अद्वितीय, कम पारंपरिक रूप को रंग र शैली को स्प्लैश को लागि उत्तम विकल्प हो। धेरै पुरानो चीजहरु को लागी, गेस्टोन को छल्ले गुणवत्ता रत्न संग, रंगहरु र रूबी देखि नीलमणि, मर्गनाइट्स, ओप्लेस सम्म बनाइन्छ ... सामान्यतया केन्द्र को पत्थर को रूप मा डिजाइन गरिन्छ जुन सानो हीरे या रंगहीन पत्थरों देखि घिरे हुन्छ।
धेरै वर्षहरु मा त्यहाँ टिभीनी, कार्टियर र हैरी विंस्टन धेरै संलग्नता रङ डिजाइनरहरू छन् जसका ब्रान्डहरू लक्जरी र अप्ठ्यारोसँग समेटिएका छन्। दुर्लभ र अनौठो हीराहरू घमण्ड गर्ने र धनी र प्रसिद्ध ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित हुन अक्सर सगाई रङ डिजाइनरहरू अधिक प्रतिष्ठा र विशिष्टता प्रदान गर्दछ। यो गहने विश्वमा व्यापक रूपमा चिनिन्छ जुन डिजाइनर र नाम ब्रान्ड गहने प्रायः बढी महँगो हुन्छ।
हाम्रा डिजाइनरहरू केवल तपाईंको लागि एक अनुकूल डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। धेरै विकल्पहरु संग, तपाईं आफ्नो सही पल को लागि सही अंग को खोज गर्न को लागि सुनिश्चित हो।